Washington City Offices Geogrid - China Xi'an Homey Technology
Ro Kucheneswa Water Treatment Equipment
Standard Ro mvura kurapwa maitiro (HMJRO-500LPH)
Sea mvura kurapwa maitiro (HMJSWRO-1000LPH)
Standard Ro mvura kurapwa maitiro (HMJRO-5000LPH)
Standard Ro mvura kurapwa maitiro (HMJRO-2000LPH)
Mumwe geotextile nemumwe Kamudzira
Washington City Offices Geogrid
Description The Washington City Offices sezvo mashoko acho, vakagamuchira umwe kurukiswa kwacho chakaitwa Network mamiriro acho, kuti adzivirire Washington City Offices uye kuvandudza zvinonyatsorehwa kuita, kuburikidza chaiwo unhani kwacho kuumba geotextile ematongerwo zvinhu. The Washington City Offices geogrid chinhu chitsva mhando geotextile kwazvo izvo hunowedzera paguva rakarongwa uye roadbed. The chinhu rakarukwa Washington City Offices filament rakarukwa uye zvemapuranga. Rine yakakwirira tensile simba, pasi elongation, yakakwirira kwakavharwa nenyama modulus rakaisvonaka R ...
Supply Mano: 50 Piece / Pieces pamwedzi
The Washington City Offices sezvo mashoko acho, vakagamuchira umwe kurukiswa kwacho chakaitwa Network mamiriro acho, kuti adzivirire Washington City Offices uye kuvandudza zvinonyatsorehwa kuita, kuburikidza chaiwo unhani kwacho kuumba geotextile ematongerwo zvinhu.
The Washington City Offices geogrid chinhu chitsva mhando geotextile kwazvo izvo hunowedzera paguva rakarongwa uye roadbed. The chinhu rakarukwa Washington City Offices filament rakarukwa uye zvemapuranga. Rine yakakwirira tensile simba, pasi elongation, yakakwirira kwakavharwa nenyama modulus wakanakisisa nemishonga yakakwirira uye shoma tembiricha mabasa nezvimwewo, pashure pamusoro unhani kurapwa, yakanaka alkali nemishonga uye kuchembera nemishonga, zvinowanzoshandiswa Asphalt pakarongwa namabwe, esimende kongiri namabwe uye roadbed enhancement; zvose zvakaoma mugwagwa uye kusanduka nzira ingashandiswa, zvichienzaniswa chinyakare mugwagwa anogona kuderedza mutengo, kuwedzera upenyu, kudzivirira mugwagwa chadzera makatsemuka. Washington City Offices Geogridrinogona kushandiswa njanji, yendege, mvura conservancy, dhamu nezvimwe nyoro ivhu enhancement uye roadbed enhancement.
1) High tensile simba, pasi elongation
2) No-refu zvinokambaira
3) Thermal pakusimba
4) kugarisana naye Asphalt masanganiswa
5) muviri uye mushonga isimbe
6) uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. Kuisa uye Kungorambidza
Kunogona zvinowanzoshandiswa kwerunyararo akare esimende pakarongwa namabwe, chomugwagwa unofamba nendege, mai, materu dziviriro, mugwagwa uye bhiriji yakarongwa matombo chisimbiso kubudiswa uye dzimwe ouinjiniya nzvimbo.
Specification uye parameters
Basalt Fiber anowedzera Geogrid
Bhitumini Coated Washington City Offices Geogrid
Bhitumini Coated Washington City Offices Geogrids
Washington City Offices rinochengeterwa Geogrid
Washington City Offices Mesh Geogrid
Washington City Offices Triaxial Geogrid
Hdpe Washington City Offices Polyester Geogrid
High Quality Sale Washington City Offices Geogrid
P Washington City Offices Polyester Geogrid
Tensile Strength Washington City Offices Geogrid
Yakarukwa dzakarukwa Washington City Offices Geogrid